Alarobia 18, 2021 Alarobia, Oktobra 13, 2021 Douglas Karr
Nisy namana tsara Chris Reed nandefa hafatra tamiko nanontany raha nanandrana an'i Canva aho ary nilaza tamiko izy fa tiako izany. Marina tanteraka izy… Notsapaiko nandritra ny ora vitsivitsy izany ary gaga tamin'ny famolavolana matihanina azoko natao tao anatin'ny minitra vitsy! Tena mpankafy Illustrator aho ary nampiasa azy io nandritra ny taona maro - saingy sarotra tanterahina aho. Mino aho fa mahafantatra famolavolana tsara
Raha manoratra amin'ny bilaogy ianao, mitantana tranokala iray, na mandefa amin'ny rindranasa tambajotra sosialy toy ny Facebook na Twitter, ny sary dia mety ho ampahany lehibe amin'ny fantson'ny atiny. Ny zavatra mety tsy fantatrao dia ny tsy fahaizan'ny typografia stellar na endrika amam-bika mahomby amin'ny fakana sary mafana. Etsy an-danin'izany, ny fakana sary maranitra sy mazava dia hanatsara ny mpampiasa? fahitana ny atiny ary manatsara ny fijery sy fahatsapana ankapobeny ny anao